Ku Iibinta Khadka Tooska ah: Soo helitaanka Waxyaabaha Soo Kordhinta ee Rajadaada ah | Martech Zone
Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee aan maqlo waa: Sideed ku ogtahay farriinta loo adeegsanayo degitaanka bogga ama ololaha xayeysiinta? Waa su’aal sax ah. Farriinta khaldan ayaa ka adkaan doonta qaabeynta wanaagsan, kanaalka saxda ah, iyo xitaa bixinta badan.
Jawaabtu waa, dabcan, waxay kuxirantahay halka ay rajadaadu tahay meertada iibsiga. Waxaa jira 4 tallaabo oo waaweyn oo ah go'aan kasta oo iibsi ah. Sidee ku ogaan kartaa halka ay rajadaadu tahay? Waxaad u baahan tahay inaad aqoonsatid kuwooda iibsashada waxyaabaha kiciya.
Si loo qodo kuwa wax iibsanaya, aan isticmaalno tusaale aan wada xiriiri karno: ka adeegashada suuqa.
Barashada ku saabsan Iibsiga Kiciyeyaasha Mall
Khibradaha dukaamaysiga ugu fiican waxay ku yaalliin suuqa. Waxay aad ugu fiican yihiin inay kaa rogaan wareegga, nafta lumisay ee macaamiisha. Marka bal aan eegno sida ay kula falgalaan oo aan u baranno casharo kooban oo ku saabsan aqoonsiga waxyaabaha kiciya iibsashada.
Tixgeli inaad aragto bakhaar aadan waligaa horey u dhigan, oo aad dib ugu raagto adoo fiirinaya. Waxaa laga yaabaa inaad ku sugan tahay suuqa oo aad fiirineyso calaamadaha isku dayaya inaad ogaato cidda ay yihiin iyo maxay qabanayaan. Kahor intaadan xitaa dooran inaad ku dhex gasho ganacsigaas gaarka ah, asal ahaan waad tihiin loitering.
Waa erey adag, laakiin waa mid wanaagsan in la sharxo qaybta hore ee is-dhexgal kasta. Ereygan wuxuu khuseeyaa dadka imanaya websaydhkaaga ka dibna mar labaad u soo baxa; ereyga 'heerka sare u kaca' waxaa loo isticmaalay in lagu sharaxo dhacdadan. Kuwani waa Loiterers, xitaa xitaa runti ma ahan marxaladdan. Iyagu waa dad imanaya nooc ka mid ah haasaawaha, oo markaa waxaan ka bilaabaynaa macaamiisha sii kordhaysa wajigaas.
Sida Loola Dhaqmo Loiterer: "Waxbadan Ka Baro"
Wicitaanka-ugu-waxqabadka ugu horreeya ee istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah xitaa rajada aan u qalmin ayaa ah wax dheeri ah baro. Martiqaadkan aasaasiga ah waxaa loogu talagalay inuu noqdo heerka ugu hooseeya ee ballanqaad ee aad weydiisan karto rajo - si fudud waqti ku qaad si aad wax badan uga ogaato.
The wax dheeri ah baro wicitaan-ka-ficil sidoo kale waa mid ka mid ah xeeladaha internetka ee inta badan la isticmaalo si loo helo rajooyin lagu bixiyo macluumaad. Dhamaan suuq geynta waxyaabaha aasaasiga u ah a wax dheeri ah baro istaraatijiyad. Dalab kasta oo bilaash ah oo baraya rajadaada wax aysan horay u aqoon waa a wax dheeri ah baro wac-ficil.
Kuwani wax dheeri ah baro wicitaan-ku-fal waxaa laga yaabaa in lagu saxo oo la xiriirta waxa aad baraysid. Tusaale ahaan, Websaydhka CrazyEgg ayaa sheegay in I tus Karkayga kululaynta taas oo runti baraysa rajadooda wax cusub oo aysan horay u aqoon.
Qalabka iibsiga ee aad raadineyso waa qof kaaga jawaabaya adiga wax dheeri ah baro wac-ficil. Waxay kor u qaadayaan gacmahooda waxayna ku siinayaan ogolaansho inaad ku sii wadato suuqgaynta iyaga.
Maskaxda ku hay in rajadaadu ay ka jawaabeyso maxaa yeelay runtii waxay rabaan inay wax bartaan - markaa ha ku qarin waxyaabaha iibka gadaashiisa a wax dheeri ah baro wac-ficil. Haddii aad u maleyneyso in rajadaadu ay diyaar u tahay inay iibsato, ka dib iyaga sii hadda soo iibso ama a hagaaji wac-ficil in badan oo la jaanqaadaya filashooyinkooda.
Dulucda: Waxaad ubaahantahay wax cad oo geesinimo leh si aad ugu sharaxdo waxaad tahay a Loiterer.
Ku noqo Mall
Aynu u qaadanno inay wax ku saabsan dukaanku ku soo jiiteen. Tani waa barta aad ka geleyso dukaanka maxaa yeelay waxaad kaliya isku dayeysaa inaad dareen ka hesho waxa socda ama waxa ay iibiyaan.
Waad ogtahay waxa xigi doona. Iibiyaha ayaa kuu soo dhowaanaya oo ku weydiinaya inaad wax raadineyso. Jawaabtaadu waa ku dhowaad otomaatig ah,
"Waxaan kaliya raadinayaa."
Waxaan ugu yeeraa a Fiiri.
Qof uun bilaabaya inuu meheraddaada ka qayb galo laakiin aan run ahaantii garanaynin ama aadan haysan xitaa wax aad iibsato ayaa iska leh.
Laakiin way raadinayaan maxaa yeelay weli ma aysan ogaan waxa ay doonayaan ama u baahan yihiin. Waa dukaanka shaqadiisu inay wax walba u dhigto si aad adigu u ogaan kartid naftaada, maxaa yeelay malaha inaadan la macaamilin iibiyaha xilligan.
A Fiiri runti wuxuu xiiseeyaa aragtida koowaad. Waxyaabaha waa kuwo shucuur iyo muuqaal leh marxaladdan. Tani waa sababta dukaanku uu u jiifsadaa sariirtooda sariirta gogosha, istaaga habeenkii, iyo alaabta guriga - si aad ugu malayn karto gurigaaga.
Kaliya iskama laalayaan sariiraha derbiga oo waxay kaa dhigayaan inaad dhex marto.
Adiguba, waa inaad caawisaa kanaga Fiiri aragtid noloshooda ka dib markaad isticmaasho badeecadaada ama adeeggaaga.
Qofka wax iibiya ee goor hore ku hawlan - xoogna leh - marxaladdan ma noqon doono macaamiil sii kordheysa. Way eryan doonaan.
Laakiin ka sii muhiimsan, illaa ay iyagu malayn karaan naftooda inay la baxayaan wax dukaankaas ku jira, way baxayaan dhowaan. Waqtigoodu waa mid qiimo leh oo haddii wax ka mid ah dukaankan aysan saameyn ku yeelan, way iska sii socon doonaan.
Sida Loola Shaqeeyo Muuqaal: “Nolol Ka Wanaagsan”
Baaq-ficilkan ayaa ah midka noogu caansan ee ku saabsan xayeysiinta TV-ga. Sababtoo ah uma badna inaad ka kici doontid sariirtaada oo aad isla markiiba wax iibsaneyso, noocyada waaweyn badankood waxay isku dayaan inay kaa dhigaan inaad sifiican uga dareemeyso iibsashada wax soo saarkooda - marka aad ugu dambeyntiina ku dhowaato.
Ka fikir ku dhowaad ganacsi kasta oo biir ah oo aad waligaa aragtay. Waxaad noqon doontaa jinsi, waxaad yeelan doontaa saaxiibo badan, waad ka taajirsan doontaa…. waxaad helaysaa fikradda.
Hubaal, ka nolol wanaagsan xalinayso dhibaato, maahan mid aad wali aqoonsatay.
Istaraatiijiyadda suuqgeynta halkan waa in si fudud loogu calaamadeeyo badeecad iyada oo abuureysa nolol ka wanaagsan - wax kasta oo macnaheedu yahay macmiilkaaga kaamil ah. Marka, baaq-ficilkan wuxuu diiradda saarayaa adiga dareemay baahiyo, wax aad u baahan tahay, laakiin weli kama hadal ama xitaa kama fikirin. Waxay ku shaqeysaa heer shucuur leh.
The Fiiri ugu jawaabayaa nolol wanaagsan wac-ficil maxaa yeelay waxay rabaan waxaad muujisay - in kastoo aysan u maleynaynin inay doonayeen kahor intaysan kula kulmin. Waa hab muhiim ah oo kaa caawinaya rajadaada si loo ogaado baahidooda - xitaa haddii aan la hadlin.
Ha u maleynin in wicitaankan-ficilku waxtar u leeyahay oo keliya xayeysiinta TV-ga. Waxay sidoo kale muhiim u tahay suuqgeynta tooska ah.
Haddii rajadaadu aysan isla markiiba ogaan ama aaminin inay leeyihiin baahiyaha aad wax ka qabanayso, waa inaad muujisaa sida badeecadaada ama adeeggaagu u abuuri doono nolol ka wanaagsan.
Iyada oo ku xidhan sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu qancin karto rajadaada inaad ku bixin karto noloshaas wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad leedahay a Hel Nolol Cadaadis la'aan or Hayso Lacag Kharashaad Badan wac-ficil. Tani waa suuqleyda tooska ah ee u dhiganta ganacsiga biirka.
Soo kicinta iibsiga halkan ayaa ka jawaabeysa adiga nolol wanaagsan wac-ficil. Iyagoo ka jawaabaya taas, waxay kor u qaadeen gacmahooda waxayna muujiyeen inay runtii rabaan waxaad bixineyso. Dabcan, wax fikrad ah kama hayaan sida ay u shaqeyso ama qiimaha ay ku kacdo; wali waxaad ubaahantahay inaad kasbato xaqa aad uxireyso iibka, laakiin hada, waxaad ku socotaa wadada saxda ah.
Dulucda: Waxaad u baahan tahay inaad ku rinjiyeysid aragtida ah Fiiri leh sharaxaad ku saabsan sida aad u awoodid badalo noloshooda.
Ku daalacashada Dukaanka Mall
Hada qiyaasi inaad raadineyso dukaankaan cusub oo si lama filaan ah wax kuugu qabanayaan ishaada.
Waxaad ogaatay inay tahay wax aad jeceshahay ama aad ubaahantahay. Tani waxay noqon laheyd qodobka markaad wax ka soo qaadan karto shelf, adoo baaraya.
Waqtigan xaadirka ah waxaad isbarbar dhigaysaa oo aad isbarbar dhigaysaa. Waxaad fiirineysaa qiimaha, waxaad fiirineysaa sumadda waxaadna fiirineysaa waxa kujira.
Hadda waxaad tahay a Dukaanka, runtii ku hawlan diyaarna u ah in aad go'aan ka gaarto in tani ay tahay wax aad u baahan tahay iyo in kale.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ka hor intaan qodobkan, laga yaabaa inaadan xiiseyneyn wadahadal lala yeesho iibiyaha. Xaqiiqdiina ma aadan xiiseyneynin astaamaha sheyga.
Dukaanku runtii wuu bilaabi karaa inuu la falgalo Dukaanleyda adoo sahlaya inaad isku waafajiso baahidaada iyo faa'iidooyinka wax soo saarkooda. Ka dhig mid si fudud loo aqrin karo, oo si fudud loo heli karo.
Hase yeeshe, ka sii wanaagsan, waxaad siisaa qalab iyo adeegyo shakhsi ahaaneed iyo adeegyo isku xira baahidaada rajada iyo faa'iidooyinka aad bixiso. Markasta oo shakhsiyan la shakhsiyeeyo, ayaa ka sii fiican.
La macaamilista Dukaamelaha: “Hagaaji”
Ka hor intaanay rajadu diyaar u ahayn inay wax iibsato, badiyaa waxay kaliya doonayaan inay hagaajiyaan dhibaatooyinkooda - taas oo dabcan, ku dhiirrigalin karta inay iibsadaan.
The hagaaji wax-u-qabadka wuxuu ku jihaysan yahay sidii dhibaatada rajadaadu u bixi lahayd.
Dabiiciga degdegga ah wuxuu leeyahay wax weyn hagaaji wac-ficil bogga gurigooda.
Waxay aqoonsadaan dhibaatada: ma haysatid taraafiko kugu filan.
Marabtaa inaad hagaajiso? Kadib isqor.
The hagaaji wicitaan-ka-ficil wuxuu u horseedi karaa iib, laakiin inta badan wuu ka horreeyaa.
Waxaad arki doontaa ganacsiyo badan oo isticmaalaya a hagaaji wac-ficil isla markiiba. Taasi waa hagaagsan tahay haddii dhibaatada aad isku dayeyso inaad xalliso ay tahay mid muuqata oo u baahan in la soo bandhigo.
Laakiin milkiileyaal badan oo ganacsi, dhibaatadaasi way mugdi kartaa. Marar badan rajooyinkeennu waxay dareemaan xanuunka, laakiin ma ogi halka uu xanuunkaasi ka imanayo. Haddii aad isku aragto inaad sharrax ka bixineyso taas rajadaada, waxaa laga yaabaa inaad u booddo hagaaji wac-ficil si dhakhso leh.
The Dukaanka garanayo waxa dhibaatadiisa ama dhibaatadeedu tahay oo uu doonayo in la xaliyo. Luqad kasta oo ku dhiirigalinaysa isaga ama iyadu inay xalliyaan dhibaatadaas ayaa u qalma.
Waa wicitaan ficil xoog leh waxaana badanaa loo adeegsan karaa in lagu ogaado nooca rajada aad leedahay iyo sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo.
Inta badan, hagaaji wicitaan-wax-qabadku wuxuu u yimaadaa kooxo iyagoo rajo ka qaba inay doortaan midka ku habboon baahidooda. Halkan, istiraatiijiyadda suuqgeynta ayaa ah in lagu kala sooco rajooyinka qaybaha baahida si aad ugu tilmaamtid jihada xalka saxda ah.
Wax soo iibsiga halkan ayaa la falgalaya adiga hagaaji wac-ficil. Adigoo gujinaya, rajadaadu waxay kor u taagtay gacmahooda oo tilmaamtay, haa, runti waxay leeyihiin xanuunka aad tilmaamayso waxayna rabaan waddo ay ku baxdo. Hadda, waxaa la joogaa waqtigii laga wada hadli lahaa sida aad taas u samaynayso.
casharka: Waxaad u baahan tahay inaad soo bandhigto faa'iidooyinka alaabtaada ama adeeggaaga hab u dhigma baahida adiga Dukaanka - kaliya xaqiiqooyinka xilligan, laakiin ugu dhakhsaha badan.
Ma rabtaa in lagaa caawiyo wadahadalka iibka ee ay tahay inuu raaco hagaaji wax-u-qabasho? Soo degso qoraalkan Bilaashka ah ee Tigidhada Sare oo buuxi meelaha banaan si aad uxirto heshiisyo badan oo tikidho sare ah:
Soodejiso Qoraalka Iibinta Tigidhada Sare
Ku wajahan Diiwaanka Lacagta
Haddii go'aankaasi yahay mid togan, rajadaadu waxay ka soo guureysaa inaad ahaato dukaanle oo waxay noqotaa a Buyer.
Iibsade waa qof diyaar u ah inuu wax iibsado.
Tani waa halka tafaariiqda ay ka soocdo kuwa guuleysta iyo kuwa laga adkaado. Maxaad ku dareemeysaa dukaanka markaad diyaar u tahay inaad wax iibsato laakiin ma heli kartid diiwaanka lacagta? Ama kaaga darane, waad heshaa, laakiin ma jirto cid ku caawinaysa?
Weligaa makaga baxday dukaanka maxaa yeelay ma iibsan kartid waxaad rabtay?
Tafaariiqleyda taas oo si cad u muujineysa helitaanka diiwaanka lacagta ayaa si fiican u shaqeynaya. Ama waxay ku taal meel muuqata ama waxaa ku weheliya iibiya kaas oo shakhsi ahaan kuu geynaya halkaas.
Wax kasta oo kale waa guuldarro khibrad ah. Ma noqon kartid macaamiil sii kordheysa haddii aysan kaa iibsan karin.
Tani way muuqan kartaa haddii aad leedahay goob ecommerce ah. Laakiin mararka qaarkood alaabooyinkayaga ama adeegyadeennu waxay u baahan yihiin xoogaa tallaabooyin ah oo lagu xirayo heshiiska.
Hadday sidaas tahay, ha "qarin diiwaanka lacagta." Hubso in rajadaadu taqaanno sida loo noqdo macmiil.
La macaamil Iibsade: “Iibso Hada”
Wicitaanka ugu-toosan uguna caansan uguna caansan waa midka rajada ka qaba in shaashadda jeexjeexdo: hadda iibso!
Waad arki kartaa hadda soo iibso siyaabo kala duwan loogu qeexay aagag wax soo saar oo kala duwan. Buug-gacmeedka elektaroonigga ah, wacitaanka ficilku wuxuu marka hore dhahayaa “Ku dar gaadhigii.” Laakiin aasaas ahaan, waxaan weydiisaneynaa rajada ah inaan iibsanno waxa ay ku kordhinayaan gawaaridooda.
Waqtiyada kale, hadda soo iibso waxaa lagu oran karaa sheyga aad raadineyso inaad iibsato. Sida Xubin Noqo ama Dhis Qorshahayga. Nooc noocan ah ayaa aad ugu habboon uguna gaar ah xaaladda waxayna kor u qaadi kartaa jawaabta adoo shakhsi ahaan u codsanaya.
Mararka qaarkood hadda soo iibso lacag kuma lug laha, laakiin taa bedelkeeda waxay u baahan tahay rajo ah in lagu bilaabo badeecada bilaash. Kala duwanaanshahani wuxuu caan ku yahay moodooyinka ganacsiga "freemium", alaabooyinka leh tijaabo bilaash ah, ama dammaanad lacag-celin ah.
Dhamaan kiisaskan, ayaa hadda soo iibso wicitaan-ka-ficil waxaa loogu talagalay rajo diyaar u ah inay qabato.
Waxay kuxirantahay badeecadaada ama adeeggaaga, tani waxay qaadan kartaa waqti in lagu horumariyo. Marka laga hadlayo ganacsiga elektaroonigga ah, badiyaa isticmaalehu wuu ka tagi karaa Loiterer ilaa Buyer dhakhso badan, sidaas ah Add to Cart iyo Gaadhiga Iibsiga macno samaynaysa
Laakiin mararka qaarkood, waxaad u baahan tahay inaad kalsooni ku abuurto rajadaada iyo a hadda soo iibso wac-ficil ku saabsan isdhexgalka ugu horeeya aad ayuu u badan yahay, aadna waa dhaqso.
Taabadalkeed, dhis istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo dhista kalsoonida marka hore, ka dibna la soo boodo hadda soo iibso wac-ficil kadib markay rajadu tilmaamtay inay ka gudbeen dhammaan wejiyada iibsiga.
Soo kicinta wax iibsiga halkan ayaa ah tan ugu dambaysa ee kicinta iibsiga oo dhan; gujinaya ah hadda soo iibso badhanka. Dabcan, sidaad ogtahay, howshaadii lama qaban. Waxaad ubaahantahay inaad yeelato nidaam macaamil nadiif ah, macaamil ganacsi, xamiliso wixii diidmo ah ee ugu dambeeya, oo aad u fuliso qaab kuu fududeynaya inaad kula ganacsato
Ganacsiyo badan ayaa waxyeello u geystey “safafka dhaadheer ee laga soo galo meesha laga iibsado” - xitaa marka aadan haysan dukaan jireed.
casharka: Waxaad u baahan tahay inaad sharaxdo sida looga ganacsado aad Buyer; cadee sida loo iibsado badeecadaada una fuliso si hufan.
Isku Darka Dhamaan 4-ta Baaq-in-Ficil lagu Ogaado Waxyaabaha Iibsanaya
Mid kasta iyo wicitaan kasta oo ficil ah wuxuu u baahan yahay in lala isticmaalo dhagaystayaasha ku habboon. Waxaan dhiseynaa kalsooni iyo kalsooni - si tartiib tartiib ah - oo leh isgaarsiin kasta ama gabal ka kooban. Waxaad ubaahantahay inaad lawaafajiso waxyaabaha kujira wicitaanka-waxqabadka.
Way xun tahay in la helo wicitaan-ficil goor hore ee hawsha maadaama ay u oggolaanayso rajadaadu inay dib u dhacdo.
Ha ku dhiirrigelin iibsadahaaga inuu iibsado ka dibna la socdo a Wax dheeri ah aqriso wac-ficil.
Nidaamkan ka socda Loiterer iyada oo loo marayo Fiiri, si ay u Dukaanka, si ay u Buyer waa waxa aan ugu yeedho tahriibka. Waa awooda rajada ee ah in la doorto la macaamil ganacsi heer qoto dheer oo qoto dheer ilaa ay doortaan inay noqdaan macaamiil.
Macno ahaan, ma kordhineysid macaamiil - iyagu wey is horumarinayaan. Waxa kaliya ee aad sameyn karto ayaa ah inaad siiso waxa ay u baahan yihiin - sida saxda ah markay u baahan yihiin - oo aad soo ogaatid calaamadaha tahriibka - waxyaabaha kiciya iibsashada - xilligan ay dhacayaan.
Markaad baraneyso inaad u adeegsato mid kasta oo ka mid ah 4 wicitaan-ficil ee dhagaystayaasha saxda ah, waxaad ogaan doontaa inaad ku hogaamiso rajadaada habka iibka si habsami leh iyo kalsooni ugu badnaan.
Tags: ku dar gaadhigahadda soo iibsodhaqanka iibsadahawac talaaboxikmade-commerceecommerceloiterereegLookersiibka khadka tooska ahiibinta internetkabiqil deg deg ahdukaanleyu adeego iibsade
Isuduwidda Suuqgeynta Caalamiga ah ee Hal Sumcad oo ah 23 Dal